Ducadii Wankii yaraa ee Wanaagsanaa? Tame, Xukun iyo Xir [Jeclow]
Salaadda wananka yar ee qalbi qabow. Wankii yaraa wuxuu ahaa xayawaankii Ilaah u isticmaalo inuu nadiifiyo dembiyada dunida. Tani waa sababta ay salaadda wananka camal qabow Waa ficil iimaan ku saleysan oo ku saleysan kutubta xurmada leh.
Salaaddan waxaa loo sameeyaa ujeedooyin badan iyadoo kuxiran baahiyaha aad qabto.
Si kastaba ha noqotee, ujeedka ugu caansan ayaa ah inuu qof ku sumoobo maadaama Wanku uu calaamad u yahay qabow.
Waxaa wakiil u ah muuqaalka astaamaha ee xayawaanka, oo caloosha ku jiifa, ee ka tarjumaya xasilloonida jiritaankiisa.
Markii la codsado, tixraac ayaa lagu sifeeyay astaantan, gaar ahaan si loo codsado in kanu yahay qofka aannu u duceyno.
1 Ducada wananka camal qabow
1.1 Ducada wanjaha lihi ee loo jecel yahay
1.2 U soo ducee baraska camalka qabow, xukumaa oo xira
1.3 In la xakameeyo cadawga
1.4 Salaadda wananka jilicsan ee madaxa loogu talagalay
In kasta oo wankii jilicsanaa uu metelay xayawaan, haddana waa muuqaal muqadas ah oo ay rumaystayaashu adeegsadaan salaadda.
Tixraac waxaa loo sameeyey wanka quduuska ah ee ku jira Kitaabka Quduuska ah, gaar ahaanna buugga injiilka Sida laga soo xigtay Saint John, sidaa darteed ma ahan wax qariib ah caqiidada masiixiga.
Waxay u muuqataa dabeed madaxaaga ka sarreeya taas waxay astaan ​​u tahay quduusnimada; Wuxuu wataa iskutallaab calaamad u ah allabarigii uu u sameeyey badbaadada aadanaha iyo, sidoo kale, calan cad ayaa u muuqda astaan ​​nabad ah oo laga arki karo asalka.
Waa rinjiyeynta tilmaamaysa degganaanta, nabadda iyo is-hoosaysiinta.
Ducada wanjaha lihi ee loo jecel yahay
Waxaan kugu xardhay (magaca qofka aad rabtid inaad ku horiso) magaca Ciise, Maryan iyo Yuusuf.
Erayadan ayaan mar labaad kugu rumeysanayaa… si aad iigu timaadid sidii wan baraar qabow oo jacayl iyo fiiro iila muuqato aniga, uunka Eebbe, waxaan kaa rabaa inaad adigu kaliya iga fikirto oo aad u sameyso jacayl ka buuxo.
Aniga ... (magacaaga) ayaa kugu ammaanaya, ninkeyga (ama haweeneyda).
Magaca ruuxa xukunka, waxaan ... xukumayaa shantaada dareen, xukunkaaga, fikirkaaga, iyo doonistaada: si aad ... ugu sii ahaato taliska-a, ku sii ahaaw mid cagaaran-cagahayga oo gebi ahaanba ku xidhan-aniga, labadaba hadda sida mustaqbalka.
In markaan… arko isaga or (ama iyadu) ay i arkaan. Markaan ... maqlo isagu ... (ama iyadu) way i maqlaan. Markaan ... fiiriyo isaga ... (ama iyadu) way i fiiriyaan. Markaan ... taabto isaga ... (ama iyadu) way i taabtaan.
Markaan ... taahayo isagu ... (ama iyadu) waa taahaa.
Markaa shantaada dareen, maskaxdaada, dareenkaaga iyo qalbigaaga, weligeey baa lagu xiri doonaa isla fikirkaa. Eebbe waxaan weydiisanayaa waana dabeecada aan ugu baahanahay. Aamiin
Markii wan yar oo qabow loo duceeyo kan aad jeceshahay, qabowgiisa ayaa noqda awood maxaa yeelay ma jiro qof ka fiican isaga oo naga caawiya dhowritaanka nabadda aan badiyaa lumi karno duruufaha aan xakamayn karin.
Jacayl, inta badan xaaladahaan qalafsan ayaa dhaca.
Qofka jecel wuxuu joogi karaa u dhaqan si aan caadi ahayn y taas oo xadeysa nabadeena maskaxda. Tukashadu waa awood badan tahay xaaladahaasna waan qabsan karnaa.
Tamar darrada xun waxay waliba ka carartaa guri ay wanku had iyo jeer kujiraan salaadaha maalinlaha ah hadii ay la joogaan qoyska oo dhan markaa aad ayey ufiicanyihiin.
U soo ducee baraska camalka qabow, xukumaa oo xira
Guul, guuleysta, guuleysta.
Ciise Masiix waa guuleystaha. Sida tani ay run u tahay, waan guuleystaa ……. qalbiga ……., sidii adhi yar oo lug ah ayaa lugahayga ku yimid, siduu Ciise Masiix iskutallaabta u tegey.
Wan yar oo macaan oo meesha allabariga ku yaal ku taal, jebi cadaawayaashayda iga geesta ah; qalbigaygu ha ku dhex rogmado siduu Ciise Masiix u galay, oo wuxuu soo diray Saint Laasaros, geerida Wuu guuleystey, maadaama aan leeyahay inaan ka adkaado cadawgan khiyaanada badan …… Laba waxaan ku fiirin doonaa adiga, seddex waan kugu qaban doonaa, dhiiga Ciise Masiix ayuu qalbigaygu kugu burburin doonaa.
Waxaan arkaa cadowgayga oo indho la 'oo gacmihiina aan waxba tarin.
Dhiigga Ciise Masiix ayaa i weydiiya, mana bixin doono. Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad ii keento ……,, inaad u timaadid, adoo cagtayda isa soo dhiibay, jabtay oo niyad jabay: waxaad leedahay awood aad kaga adkaato.
Haddii wax Ibliis isku day aniga, haa a Cadaalada wuu baxayaa, ma guuleysan doono; haddii uu daafacyo dhigo, kuligood way diidi doonaan. Ciise Masiix, waad ila jiri doontaa sida wan oo kale, markaad aragtidana hortayda way wada suuxi doonaan.
Ducadan yar ee wan yar ee jilicsan si loo xakameeyo, loo xukumo oo loo xiro waa mid aad u awood badan!
Tukashadani waa in lagu sameeyaa iyada oo mas'uuliyad buuxda laga fogeeyo fikradaha xun iyo shucuurta nafsi-ahaanta.
Codsashada in la xukumo ama la isku xidho qofka ma ahan ficil keli-talisnimo ah laakiin waa jacayl maxaa yeelay marar badan fikradaha qofka kale ma cadda mana ahan halkan inay tukashadani noqonayso hubka keliya ee ugu awoodda badan.
Intaas waxaa sii dheer, waxay quseysaa oo keliya lamaanaha laakiin xaalad kasta oo kale oo aan ugu baahanahay inaan xakameyno si aysan arrimuhu faraha uga bixin.
Si kastaba ha noqotee, waxyaabaha ugu awoodda badan ee salaadda ama dhammaan salaadaha kale waa iimaanka lagu sameeyo, ma jiro salaad lagu sameeyo caqiido aan jawaab helin.
In la xakameeyo cadawga
Adhiga yar oo sharafta leh oo sharafta leh oo aad kahesho meesha allabariga, igu caawi in aan xukumo oo aan ka adkaado cadaawayaashayda iga soo horjeedda oo dhan, oo qalbigayga ku xoogaya sidii Ciise Masiix oo kale oo aan jeclaa, oo ah amarkii Saint Laasaros oo ka adkaaday, sidaan rabo Waan ka adkaaday cadaawayaashayda khiyaanada ku leh, wakhtigan xurmada leh ee aan kuu eegayo, waan ku qabanayaa oo waan kugu xidhaa, iyo dhiiggii uu Sayidkeenna Ciise Masiix daadshay, qalbigiisa ayaa jabay.
Aabahayga qaaliga ah, Wiilkayga iyo Ruuxa Quduuska ah, adigu adigu waxaad tahay hal Ilaah run ah, u oggolow cadowgayga inuu ii adeeco oo ha aamuso, sida wiilka aad ugu jeceshahay uu u tegey geedkii.
Waxaan arkaa cadowgayga oo imanaya gacmihiisa tabaaleysan iyo indho-la’aan, Oo hadduu i weyddiisto dhiiggaaga barakaysan, weligay ku siin maayo.
Waxaan kaa baryayaa sayidkayga weyn inaad ii timaadid, anigoo toobad keenaya oo cagahayga ku soo dhiibay, oo kaa adkaaday, adkaaday, oo isku shareeray, si aad uga adkaato xooggaaga weyn.
Haddii cadowgaygu u yimaado inuu isku dayo wax iga gees ah, ka sarreeya sayidkayga oo ha u oggolaan, haddii uu doonayo inuu cadaalad igu xukuno, u diid wax difaac ah oo uu lahaan karo. Anigoo ah gacaliyahayga Ciise Masiix, sida wan yar oo aad igu dhex joogi doontid, waayo markii cadowgaygu arko naftayda, sharkuu doonayo oo dhan ayaa iiga soo noqda.
Hadaad rabto inaad ka adkaato cadawga, kani waa salaadda wanka qalbi qabow.
Waxkasta oo naga xada nabadeena, taas oo ina welwel gelisa, waxay naga dhigaysaa rajo xumo ama naga dhigeysa cabsi la'aan waa xaalado ay ducadaasi noo horseedi karto inaan dib ulasocono caqliyadeena iyo nabadeena gudaha.
Adoo awood u leh xaaladaha ka imaan kara dhammaan kuwa ku dhawaaqay inay yihiin cadaawayaashayada waxay sameyn karaan wax badan oo isbedel ah natiijooyinka xaaladahaas.
Waxay noqon karaan cadawgeena ama xubin reerka ka mid ah.Qaacidan xoogani waxay naga caawin doontaa inaan arrimaha ilaalino nafteena iyo qofkastaaba.
Xaalad kasta ha noqotee.
Sidoo kale, dhammaan saameynta xun ee ay cadawgeena ku tuuraan nacaybka iyo xanaaqa waa laga fogeyn doonaa hareeraha.
Ka nadiifinta guryaheena iyo meheradaheena wixii saameyn xun ah waxay fure u tahay sii wadida xakameynta dhacdooyinka iyo go'aanada ku saabsan cadawgayaga.
Salaadda wananka jilicsan ee madaxa loogu talagalay
Hadaad rabto inaad dejiso oo aad smaamiso maamulahaaga, waxaad ku duceysan kartaa jumlad kasta oo kor ku xusan. Kaliya waa inaad bedeshaa magacaaga.
Madaxdeena ayaa mararka qaarkood noloshayada ka dhigi kara waxoogaa murugsan.
Xaaladaha badankood, ka tagista shaqada ma aha ikhtiyaar in la tixgeliyo waana waqtigaas lagu talinayo in la sameeyo duco si aan u khayaameyno madaxdeena isla markaana aan u yareynno cadaadiska shaqada.
Xaaladahan shaqo waxaa badanaa laga dareemaa guriga iyo dhammaan deegaannada aan joogno waana lagama maarmaan in aan nafteenna ka xorreyno gariirrada xun kahor inta aysan u keenin waxyeello qof u dhow.
Rumaysad, masuuliyad iyo wixii ka sarreeya ujeeddooyinka wanaagsan oo dhan waa inay noqdaan mashiinkeenna si aan u sameyno salaad walba maxaa yeelay markaas uun ayaan helnaa jawaabta aan u baahan nahay.
Muhiimadu waa taas salaadda Ruux camal qabow ayaa lagu tukaday rumaysad badan iyo aaminaad badan oo qalbigiisa ku jirta.
Kala Duwan, Ujeeddo
Riyada Ku Saabsan Illuminati